विश्व अस्थमा दिवस : श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर रोगका यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपाय « Lokpath
काठमाडौं । दम एक गम्भीर श्वासप्रश्वास रोग हो। यो रोगका कारण कतिपय अवस्थामा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
यदि समयमा उपचार प्राप्त भएन भने, अवस्था धेरै गम्भीर हुन सक्छ, त्यसैले दमको समस्या भएका मानिसहरूलाई यसको रोकथाम उपायहरू लिइरहन सल्लाह दिइन्छ।
यस प्रकारको श्वासप्रश्वासको समस्या भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो खानपान र जीवनशैलीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
विश्वभर दमको रोकथामका लागि मानिसहरूलाई सचेत गराउन प्रत्येक वर्ष मे ३ मा विश्व दम दिवस मनाइन्छ । यस वर्षको नारा ‘Closing Gaps in Asthma Care’ रहेको छ ।
दमले कस्तो प्रकारको समस्या हुन सक्छ ?
सामान्यतया जब हामी सास फेर्छौं, हाम्रो नाकबाट हावा घाँटीमा पुग्छ र त्यसपछि श्वासनली हुँदै फोक्सोमा पुग्छ। फोक्सोमा धेरै साना हावा मार्गहरू हुन्छन् जसले हावाबाट अक्सिजनलाई तपाईंको रक्तप्रवाहमा लैजान मद्दत गर्दछ । दम भएका रोगीहरुको श्वासनली साँघुरो हुन्छ वा सुन्निन्छ ।
कतिपय अवस्थामा म्युकसको उत्पादन बढेपछि सास फेर्न गाह्रो हुन सक्छ र जब हामी श्वास बाहिर निस्कन्छ, त्यहाँ खोकी, (घ्रघराहट) आउँछ। दम एक पुरानो समस्या हो जसलाई निरन्तर हेरचाह चाहिन्छ।
दमका लक्षणहरू के के हुन् ?
सास फेर्न गाह्रो हुनु र स्वास फेर्दा घरघर हुनु दमको सबैभन्दा सामान्य लक्षण हो । यसबाहेक, लक्षणहरू दमको प्रकार र यसको गम्भीरताका आधारमा र मानिसहरूमा निर्भर गर्दछ।
खोकी, विशेष गरी राती।
छातीमा कसिलोपन र सास फेर्न गाह्रो हुने महसुस हुनु।
थकान – छाती दुख्ने ।
छिटो सास फेर्न आवश्यक महसुस।
धुलो वा प्रतिकूल अवस्थामा सास फेर्न गाह्रो भएको महसुस।
दम रोग लाग्नुका धेरै कारण हुन सक्छन्। यसलाई आनुवंशिक पनि मानिन्छ, अर्थात् तपाईको परिवारमा कसैलाई दमको समस्या छ भने तपाईलाई पनि यसको जोखिम हुन सक्छ। यसबाहेक, बाल्यकालमा भाइरल संक्रमणले पनि तपाईंको जोखिम बढाउन सक्छ।
दमको उपचार के हो ?
तपाईंको दमको समस्या कति गम्भीर छ भन्ने आधारमा यसको उपचार गरिन्छ। यसका लागि डाक्टरहरूले तपाईंलाई केही औषधिहरू दिन्छन् जसले दमको अट्याकमा तुरुन्तै मदत गर्न सक्छ, यसका लागि दमको आक्रमणबाट बच्न केही औषधिहरू दिइन्छ। तर, यो समस्या भएका व्यक्तिहरूले निरन्तर रोकथाम र ट्रिगर बुझेर यसलाई रोक्न आवश्यक छ।
दमका बिरामीहरूलाई सधैं आफूसँग इनहेलर राख्न सल्लाह दिइन्छ।
दमको आक्रमणबाट बच्न रोकथामका उपायहरू गरिरहनु धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसका लागि, तपाईंले पहिले तपाईंको समस्या बढाउन सक्ने कारकहरूको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। धूलो, चुरोटजन्य चीजबाट बच्नुपर्दछ, यसले समस्यालाई अझ बढाउन सक्छ। आफ्नो फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न र दमका लक्षणहरू रोक्नको लागि नियमित सास फेर्ने अभ्यास गर्नुहोस्।
प्रकाशित मिति: २०७९,बैशाख,२०,मंगलवार १४:५७